यसरी सुत्नुहोस् : तपाईको वैवाहिक जीवनमा हुन्छ कायापलट ! « Lokpath
२०७७, १४ आश्विन बुधबार ०९:२२
यसरी सुत्नुहोस् : तपाईको वैवाहिक जीवनमा हुन्छ कायापलट !
प्रकाशित मिति : २०७७, १४ आश्विन बुधबार ०९:२२
श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्ध राम्रो बनाउन धेरै कुराको ध्यान पुराउनु जरुरी छ । तर कतिपय अवस्थामा यस्ता कुराहरु पनि हुन्छन् जसलाई तपाईंले कहिले सोच्नु पनि भएको हुँदैन । सानो–ठूलो जे भएपनि यस्ता कुराहरुले सम्बन्धमा निकै सकारात्मक असर पुराउने गर्दछ ।
एक अनुसन्धाका अनुसार यदि तपाईं राती आफ्नो पार्टनरसँग नाङ्गो शरिर लिएर सुत्नुहुन्छ भने तपाईंको सम्बन्ध अझ राम्रो हुनेछ ।
विवाह गरिसकेपछि यदि तपाईं हरेक रात यस्तो गर्नुहुन्छ भने तपाईंले अरु साधारण दिनहरुभन्दा त्यो दिन विशेष महसुस गर्नुहुनेछ । राती लुगा लगाएर सुत्ने जोडिभन्दा नलगाई सुत्ने जोडिहरु एक अर्काप्रति सन्तुष्ट र खुसी हुने गर्दछन् ।
ब्रिटेनका पोट्समाउथका ३३ वर्षीय म्याकेजीले आफू ६ वर्षदेखि श्रीमतीसँग नाङ्गै सुत्ने र आफ्नो जीवनमा निकै खुसी भएको बताए । उनलाई यसरी सुत्दा सजिलो पनि हुने बताए । उनी भन्छन् कि उनकी श्रीमतीपनि उनीसँग यस्तै अवस्थामा सुत्ने गर्दछिन् र उनीहरु आफ्नो जीवनमा निकै खुसी भएको बताए ।
अमेरिकाको एक कटन कम्पनीका मालिक स्टिफन थायरले भने कि सम्बन्ध राम्रो बनाउका लागि धेरै कुराहरुको सम्मिश्रण हुन जरुरी छ जसमध्ये यो पनि एक कारण हुनसक्छ । यसका साथै तपाईंको बेडरुमले पनि मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ । यदि बेड नरम छ भने मानिसहरु नाङ्गो भएर सुत्न रुचाउँछन् ।
प्रेमिकालाई कसरी खुशी बनाउने !
काठमाडौं । भनिन्छ- बैंसमा होश पु-याउनु जरूरी हुन्छ । यसका लागि केही उपाय
३० रुपैयाँको चिट्ठाले रातारात करोडपति…
वर्षमा १३ महिना हुने देश, अहिले चल्दैछ २०१३ !
काठमाडौं । संसारमा एउटा यस्तो देश छ जहाका मानिसहरु अहिले २०१३ मनाईरहेका छन्